3D Acoustic Wall တပ်ဆင်ခြင်း - သတင်း - Suzhou Soundbetter Architectural Materials Co., Ltd.
3D Acoustic Wall တပ်ဆင်ခြင်း။
တပ်ဆင်ခြင်း။3D Acoustic Wall
1. 3D Acoustic Wall
(1) 3D Acoustic Wall ၏ သိုလှောင်မှုသည် တင်းကျပ်ပြီး ခြောက်သွေ့မှု လိုအပ်သည်။ တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ၊ ထုပ်ပိုးထားသော သစ်သားသေတ္တာကို ၄၈ နာရီထက်ပို၍ ဖွင့်ထားရန် သေချာစေရန်၊ ထုတ်ကုန်သည် တပ်ဆင်သည့်နေရာနှင့်တူသော သဘာဝပတ်၀န်းကျင်သွင်ပြင်လက္ခဏာများရရှိကာ အိမ်တွင်းလေထုထဲသို့ ပေါင်းစပ်ခြင်းဖြင့် ပုံသဏ္ဍာန်ဖြစ်လာစေရန်အတွက် ထုပ်ပိုးထားသော သစ်သားသေတ္တာကို ၄၈ နာရီကျော်ကြာဖွင့်ထားရန် သေချာပါစေ။
(၂) မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်များ၊ သတ်မှတ်ချက်များ၊ မော်ဒယ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့် စုစုပေါင်းအရေအတွက်ကို စစ်ဆေးပါ။3D Acoustic Wallမတည်ဆောက်မီ။
(၁) တပ်ဆင်သည့်နေရာသည် ခြောက်သွေ့ပြီး အပူချိန် 10 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်ထက် မနည်းသင့်ပါ။
(၂) တပ်ဆင်သည့်နေရာ၌ တပ်ဆင်ပြီးနောက် ပိုမိုကြီးမားသော ပတ်ဝန်းကျင်စိုထိုင်းဆ၏ပြောင်းလဲမှုတန်ဖိုးကို 40-60% အကွာအဝေးအတွင်း ထိန်းချုပ်သင့်သည်။
(၃) တပ်ဆင်သည့်နေရာသည် တပ်ဆင်ခြင်းမပြုမီ 24 နာရီအတွင်း လိုအပ်သော အပူချိန်နှင့် စိုထိုင်းဆအပိုင်းအခြားထက် နည်းပါသည်။
3. Main keel
(၁) သံစုပ်ဘုတ်ဖြင့် ဖုံးအုပ်ထားသော နံရံအား ဒီဇိုင်းပုံများ သို့မဟုတ် ဆောက်လုပ်ရေးပုံများနှင့်အညီ ပင်မ keel ဖြင့် တပ်ဆင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အဓိက keel ကို ပြုပြင်ပြီး ဖြေရှင်းရမည်ဖြစ်သည်။ ပင်မ keel ၏မျက်နှာပြင်သည် သံချေးတက်ခြင်းနှင့် ပုံပျက်ခြင်းကင်းသော အဆင့်၊ ချောမွေ့သင့်သည်။
(၂) ဗိသုကာ ဒီဇိုင်းသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ နံရံမျက်နှာပြင် ဆောက်လုပ်ခြင်းကို ဆောင်ရွက်ရမည်ဖြစ်ပြီး ပင်မ keel ၏ စီစဉ်မှု သတ်မှတ်ချက်သည် အဆိုပါ အစီအစဉ်နှင့် ကိုက်ညီရမည်၊3D Acoustic Wall. သစ်သား keel မျက်နှာကျက်ကြားကာလသည် 500mm ထက်နည်းသင့်ပြီး light steel keel partitions များကြားကာလသည် 600mm ထက်မပိုသင့်ပါ။ sound insulation board တွင် main keel တပ်ဆင်ခြင်းသည် ဒေါင်လိုက် အလျားနှင့် ဦးတည်ရမည်။ ပင်မ keel ၏ ကွာဟချက်မှာ ပစ္စည်းများနှင့် ပြည့်နေပါက၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့် ဖြေရှင်းချက်အား ဒီဇိုင်းသဘောတရားအရ လုပ်ဆောင်ရမည်ဖြစ်ပြီး၊ အသံစုပ်ယူမှုဘုတ်ပြားကို တပ်ဆင်ခြင်းအား ထိခိုက်မှုမရှိစေရပါ။
(1) နံရံသတ်မှတ်ချက်များကို တိကျစွာတိုင်းတာပါ- တပ်ဆင်မှုအနေအထားကို ဆုံးဖြတ်ပါ၊ မျဉ်းဖြောင့်နှင့် bisector ကိုသတ်မှတ်ပါ၊ ကေဘယ်ပေါက်များ၊ ရေပိုက်များနှင့် အခြားအရာဝတ္ထုများ၏ ဖြတ်ပိုင်းနှင့် ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသည့် သတ်မှတ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပေးပါ။
(၂) ဖြတ်တောက်ခြင်း- ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်၏ သီးခြားသတ်မှတ်ချက်များနှင့်အညီ အသံစုပ်ယူနိုင်သော panel ၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကို တိုင်းတာပြီး ဖြတ်တောက်ခြင်း (ဆန့်ကျင်ဘက်အား symmetry ဖြင့် သတ်မှတ်သည်၊ အထူးသဖြင့် အသံအပိုင်းကို ဖြတ်တောက်ခြင်းဆိုင်ရာ သတ်မှတ်ချက်ကို အာရုံစိုက်ရန်လိုအပ်သည့်အခါ၊ နှစ်ဖက်စလုံးတွင် symmetry ကိုသေချာစေရန်စုပ်ယူထားသော panel ကို) နှင့်ဝါယာကြိုးဘောင် (ဝါယာကြိုးဘောင်၊ အပြင်ထောင့်ဝါယာကြိုးဘောင်၊ ချိတ်ဆက်ဝိုင်ယာဘောင်) နှင့်ကေဘယ်ပေါက်များ၊ ရေပိုက်များနှင့်အခြားအတုံးများအတွက်အပေါက်များကိုဖြတ်ပါ။
5. ထည့်သွင်းပါ။3D Acoustic Wall
(၁) နံရံတွင် ပင်မကလီကို အရင်တပ်ဆင်ပါ။
(၂) ပင်မ keel နှင့် sound-absorbing board ကြားရှိ အသံ insulation board ၏နောက်ကျောတွင် အသံစုပ်ယူနိုင်သော ချည်ကြိုးကို တပ်ဆင်ပါ။
(1) 3D Acoustic Wall ၏ တပ်ဆင်မှု အစီအစဥ်သည် ဘယ်မှညာမှ အောက်ခြေမှ အပေါ်မှ စံနှုန်းကို လိုက်နာသည်။
(၂) အသံစုပ်ယူနိုင်သော panel ကို အလျားလိုက် တပ်ဆင်သောအခါ၊ စည်းဝေးပွဲလိုင်းသည် အထက်သို့ တက်လာပြီး ၎င်းကို စဉ်ဆက်မပြတ် တပ်ဆင်သောအခါ၊ တပ်ဆင်သည့်လိုင်းသည် ညာဘက်တွင် ရှိနေသည်။
(၃) သစ်သားသိုးမွှေးကို ချီပြီးသွားတဲ့အခါ3D Acoustic Wallဘုတ်နှင့်ဘုတ်၏ပေါင်းစပ်မှုတွင်တပ်ဆင်ထားသည်၊ ဘုတ်ခေါင်းနှင့်ဘုတ်ခေါင်းကြားတွင်3မီလီမီတာကွာဟမှုရှိသင့်သည်။ ၎င်းကို အောက်ခြေတွင် ထည့်သွင်းပြီး ဘောင်တစ်ခုဖြင့် ချိတ်ပါ၊ ထို့နောက် အခြား အသံစုပ်ယူနိုင်သော အကန့်များကို တစ်ခုပြီးတစ်ခု တပ်ဆင်ပါ။
7. အသံစုပ်ယူနိုင်သောဘုတ်အား ပင်မ keel တွင် တပ်ဆင်ထားသည်။
(1) Light steel keel partition- အထူးတပ်ဆင်အစိတ်အပိုင်းများကို ရွေးချယ်ပါ။
(၂)3D Acoustic Wallအပေါ်ဘက်သို့ မျက်နှာမူထားသော စည်းဝေးပွဲမျဉ်းဖြင့် အလျားလိုက် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ တပ်ဆင်မှု အပိုပစ္စည်းများဖြင့် တပ်ဆင်ထားပြီး၊ အသံစုပ်ယူနိုင်သော panel တစ်ခုစီကို ဆက်တိုက် ချိတ်ဆက်ထားသည်။
(၃) အသံစုပ်ယူနိုင်သောဘုတ်အား ဒေါင်လိုက်တပ်ဆင်ထားပြီး တပ်ဆင်သည့်လိုင်းသည် ညာဘက်တွင်ရှိပြီး ဘယ်မှညာသို့ တပ်ဆင်ထားသည်။
(၄) သစ်သားကလီ မျက်နှာကျက် - လက်သည်းခွံများကို တပ်ဆင်ပါ။
(၅) လည်ပတ်မှုအဆင့်များ- တပ်ဆင်စည်းနှင့် ဘုတ်အထိုင်တစ်လျှောက်၊ ပင်မ keel ပေါ်ရှိ အသံစုပ်ယူနိုင်သော ဘုတ်ပြားကို ပြုပြင်ရန် သံချောင်းများကို ရိုက်ပြီး သံချောင်းများ၏ 2/3 ကျော်ကို သစ်သား keel မျက်နှာကျက်တွင် ထားရှိရမည်ဖြစ်ပြီး လက်သည်းများ၊ အညီအမျှစီစဉ်သင့်သည်၊ အချို့သောနှိုင်းရသိပ်သည်းဆရှိသည်ဟုသတ်မှတ်ထားပြီး၊ အသံစုပ်ယူနိုင်သောအကန့်တစ်ခုစီရှိစုစုပေါင်းလက်သည်းများနှင့် သစ်သားကလီမျက်နှာကျက်တစ်ခုစီတွင် ပေါင်းစပ်ထားသောလက်သည်းအရေအတွက်မှာ 10 ထက်ပိုပါသည်။
လွန်ခဲ့သော:Indoor Space Acoustic Panels ကိုယ်ထည်တည်ဆောက်ပုံ
နောက်တစ်ခု:3D Acoustic Panels များ၏ Effect ကို ထိခိုက်စေသော အကြောင်းရင်းများ